Xilka Qaadis uu la kulmi doono Tuulax & Sababta ka dambeysa | Somalia News
Xilka Qaadis uu la kulmi doono Tuulax & Sababta ka dambeysa
Xildhibaan hore Cali Seeko ayaa aad loogu saadaalinayaa in uu badalo guddoomiye ku xigeenka amniga iyo Siyaasadda ee gobolka Banaadir maadaama awood qeybsiga uu kursiga ku weynayo Tuulax.
Cali Seeko ayaa horay ula soo shaqeeyey dowladda hoose ee Xamar mar wuxuu ahaa Afhayeenka dowladda hoose marna Xildhibaan.
Iyadoo dhawaan qof kasoo jeeda Beesha gabar gidir jufada Sacad Xilka Ra’iisal wasaaraha cusub ayaa Beesha saleebaan heleysaa Xilka hadda uu hayo Tuulax.
Sawirro uu lasoo galay Cali Seeko Madaxweyne Farmaajo ayaa loo badiyey in Booska Tuulax heli doonto.
The post Xilka Qaadis uu la kulmi doono Tuulax & Sababta ka dambeysa appeared first on Somali News Leader.
Previous articleNew Minneapolis Council Member Gives Voice to Diverse Ward – U.S. News & World Report
Next articleMadaxweyne Trump oo ka badbaaday qorshe la damacsanaa in lagu sumeeyo (Sawirro)